ODUU - OROMOTV
Oduu guyyaa arraa,oduu haaraa,oduu oromotv,oduu keelloo,oduu ammee
Share/Qoodi FINFINNEE — Mudde 16 bara 2013 manni murtii waliigala Oromiyaa qondaaltota siyaasaa, kan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa walaba taasisuun gadi lakkisee ture. Haa ta’u malee poliisiin ajaja mana murtii fudhachuu waandideef namoonni kun mana hidhaa Aanaa Sabbataa Hawaasitti argamu jedhan Abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay’isaa. Gorsaan seeraa fi abukaatoon namoota …
Share/Qoodi Namoonni dhaabbilee siyaasaa ABO fi KFO keessatti socho’aniifi kan hokkora ajjeechaa Art. Hacaaluu Hundeessaan booda dhalatee walqabatee hidhaman gariin manni murtii mirgi wabii isaanii akka eegamuuf murteessuus poolisiin isaan gadhiisuu dhabe jechuun abukaatonni isaanii komatan. Mirgi Dr Huseen Kadirif seeraan kenname poolisiin sarbamaa jira jechuun abukaatoon isaanii Obbo Kadir Bulloo himaniiru. “Namni tokko sa’aa 48 …
Share/Qoodi Dhaamsa Bara Haaraa HD ABO IrraaAmajjii 2021Miseensota ABOHogganootaa fi Miseensota akkasumas deggertoota ABO kanneen mana hidhaa jirtaniifQeerroo Bilisummaa OromooUmmata Oromoo Bal’aaDeggertoota QBOFiroottan QBOfHunda dura baga bara haaraa 2021 nagaan geenye jechaa hawwii qabu maqaa hogganoota ABO, miseensota,hogganootaa fi miseensota ABO mana hidhaa jiraniin isinii dabarsa. Barri haaraan kun ummata Oromoof keessa isaatti bara nagaa fi …
Share/Qoodi By Laetitia Bader, Director, Horn of Africa, Dec 23, 2020 Laetitia Bader, Human Rights Watch’s Horn of Africa Director, recently returned from a research mission in Sudan to interview refugees who fled the fighting that broke out in Ethiopia’s Tigray region in early November 2020. For several weeks, federal government forces, the Ethiopian National Defense Forces (ENDF), and their …
Share/Qoodi 6 Bitooteessa 2020 Weellisaa Aadam Haruun; ‘Abdii Qopheen insaayikiloopidiyaa Afaan Oromoo ture’ MADDA SUURAA, MAATII WEELLISAA ABDII QOPHEE Ibsa waa’ee suuraa,Weellisaa Abdii QopheeAbdii Qopheen weellisaa, waloo fi loltuu ABO qabsoo hidhannoof bosona seene ture. Bara tokko otoo lubbuun jiruu boolla itti awwaalamu akka qotatu dirqisiifamee beeka ture.Har’a Abdiin lubbuun hin jiru, waggaa 17’n dura du’aan …
Share/Qoodi J/Jabeessaa Gabbisaa Miseensa Shanee Gumii-Gumii Sabaa ABO fi gaafatamaa Damee Dantaa Siyaasaa ABO, Jalqabarraa ka’ee waan Heera ABOtin ala maqaa “Koree Hoji-Raawwachiiftuu ABO” jedhuun deemaa ture, akka mormaa ture quba qabna. Qaboo yaa’ii maqaa “KHR” ABOtin boordii filannoo galee, gargachi nu gahe irrattis garaagarummaa qabu, gaafasuma ifatti qabsiifatee jira. Sanumaayyuu kan mallatteesse, qaboo-yaa’ii boordii filannootif …
September 22, 2020 September 8, 2021
Share/Qoodi Waamicha Walgahii Hawwaasa Oromoo Maraaf! Mata-duree ‘Tarsiimoo fi Roadmap ABOn Kaayyoo QBO Galmaan Ga’uuf Dhi’eesse’ irraatti Konyaan ABO Washington, D.C. gorsaa ol-aanaa ABO fi qondaalota ABO biroo hafeeruun uummataaf ibsaa akka kennaniif toora Zoomidhan qophii isaa xumuratee jira. Hawwaasi keenya naannoo DMV fi addunyaa irra jirtan carraa kanaan sagantaa kanatti akka qooda fudhattan hafeeramtanii jirtu. …
June 23, 2018 September 8, 2021
Share/Qoodi MUST WATCH 23/06/2018 MORMII QEERROO BILISUMMAA OROMOO FINFINNEE
June 19, 2018 September 8, 2021
June 17, 2018 September 8, 2021
June 15, 2018 September 8, 2021
June 12, 2018 September 8, 2021
June 10, 2018 September 8, 2021